400ml ဝိုင်ဖိုင်စမတ်မရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့ China Manufacturer
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:စမတ်အနံ့ပျံ့,wifi မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့,မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ကြိုင်
Home > ထုတ်ကုန်များ > စမတ်ပျံ့ > 400ml ဝိုင်ဖိုင်စမတ်မရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့
ထောက်လှမ်းရေးရနံ့ကုထုံ - အသိဥာဏ် powered နှင့် wifi သဟဇာတကြောင်းသင်၏အစမတ်အိမ်သို့တစ်ဦးကအကြီးအပွငျ။ ပုံမှန်အနံ့ပျံ့လိုမျိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ် LED မီးအရောင်, အခိုးအငွေ့ပြင်းထန်မှု, timer နေရာမှာအပြင်အဆင်များ, သင့်ဖုန်းမှအချိန်ဇယားဆွဲနှင့်ပိုပြီးတိုက်ရိုက်တူသောအင်္ဂါရပ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အဖော် app ကို download လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မတ်ပျံ့လည်းသဟဇာတ Alexa နှင့် Google မူလစာမျက်နှာဖြစ်ပြီးရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့စကားသံကို အသုံးပြု. ထိန်းချုပ်ဖို့ပဲ့တင်သံ / ကိုထိပုတ်ပါ / dot နှင့်အတူသုံးနိုင်တယ်။ တစ်ဦးကကြီးမားသော 400ml ရေတိုင်ကီစဉ်ဆက်မပြတ်အခိုးအငွေ့တက်မှ 8 နာရီအဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ULTRASONIC ငွေ့ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ultrasonic ပျံ့ချက်ချင်းလေထဲသို့ရေနှင့်ရေနံမော်လီကျူး atomize ကြောင့် 360 °အစွန်းရောက် Sonic ကြိမ်နှုန်းဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါရလဒ်အပူပျံ့နှံ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုပျက်စီးစေနိုင်သောအဟောင်းစတိုင်အပူပျံ့ထက်အများကြီးကျန်းမာအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။
Alexa & Google Home - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်သည် quickstart ကိုသုံးပါ app ကို ချိတ်ဆက်. ပြီးတော့ဖြစ်စေသင့်လက်ရှိ Alexa သို့မဟုတ် Google Home ကိုအကောင့်မှလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဆင်ပြေအရောင်များ, အခိုးအငွေ့ settings ကိုများနှင့်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများအပါအဝင်သင့်ရဲ့စမတ်အနံ့ပျံ့ထိန်းချုပ်ဖို့ကိုယ်တော်၏အသံကိုကျွန်တော်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဿုံ SAFE: အဆိုပါ DITUO သစ်သားဘောဇဉ်ပျံ့လုံးဝအဆိပ်-အခမဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းပင်သေးငယ်တဲ့ကလေးငယ်များအတွက်လုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံစေနိုင်ပါတယ်! you` ပိုကောင်းတဲ့ night` s ကိုကြွင်းသောအရာများအတွက်အိပ်ပျော်နေသောနေစဉ်တွင်သင်တို့ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာသင့်ရဲ့အာကာသအတွင်းနှင့်ပင်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာသုံးနိုင်သည်။ ရေထဲကရမှာပေါ့သောအခါ, အလိုအလျှောက်အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုများအတွက်အလုပ်လုပ်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။